Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. HONG Liang as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. HONG Liang as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. HONG Liang was born in September 1969. He joined the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China in 1993. He served in various capacities at the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China and at the Embassies of the People’s Republic of China in Malaysia and Australia. Since 2011, he has been serving as Deputy Director-General of the Department of Asian Affairs of the Ministry of Foreign Affairs.
Mr. HONG Liang is married withason.
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ မစ္စတာ ဟုန်လျန်အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဟုန်လျန်သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့ရှိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံသံရုံးများတွင် အသီးသီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစ၍ လက်ရှိကာလ အထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
မစ္စတာဟုန်လျန်သည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားတစ်ဦး ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်။